आजदेखि बाजुरा सहित थप ६ जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु, जम्मा लकडाउन गरिएका जिल्लाको संख्या कति ? - Dhangadhi Khabar
सोमबार १३, असार २०७९ १७:१९
आजदेखि बाजुरा सहित थप ६ जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु, जम्मा लकडाउन गरिएका जिल्लाको संख्या कति ?
आजदेखि थप ६ जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु भएको छ । बाजुरामा बिहान ५ बजेदेखि र रोल्पामा बिहान ६ बजेदेखि निषेज्ञाज्ञा सुरु भएको हो ।
यस्तै सुर्खेत, कास्की र पर्सामा ३१ गते राति १२ बजेसम्मका लागि थपिएको छ । बाँकेमा २७ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको सङक्रमण देशभर नै बढिरहेकोले निषेधाज्ञा अझै बढ्न सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले काम नपरी बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । अनावश्यक बाहिर निस्कने र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार २२, बैशाख २०७८ ०८:५८ मा प्रकाशित